Maxay tahay sababta Al-Shabaabku u fulisay qaraxii maanta ee madaxtooyada+Dhageyso – SBC
Maxay tahay sababta Al-Shabaabku u fulisay qaraxii maanta ee madaxtooyada+Dhageyso
Qaraxii khasaaraha badan ee dhimashada iyo dhaawaca isagu jiray geystey ee maanta ka dhacay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa masuuliyadiisa sheegtey xoogaga Shabaabka ee dagaalka kula jira ciidamada AMISOM iyo kuwa dawlada KMG Soomaaliya.
Afhayeenka Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamed Maxamuud (Sheekh Cali Dheere) oo shir jaraa’id qabtey ayaa cadeeyey in ay iyagu ka dambeeyeen qaraxaasi isla markaana uu fuliyey nin lagu magacaabo Xasan C/qaadir Cabdi oo loo yaqaan Muxsin.
Hadaba maxay rahay sababta qaraxaasi ay u fuliyeen oo ay ula jeedeen, si aad u dhageysto riix link-ga hoose.HALKAN RIIX
Maarso 15, 2012 at 9:06 am
Muxzinoow ku nooloow muxibada firdawzaad xuural cayn lamaaweel malabka iyo caanaha khamri madaxa aan dilin biyahoo macaan badan ka cad mara bafta ahoo dawaynaaya maankiyo mirohoo kun noocya ah.marinkii siraadkana miriq iyo hilaacood umartaa sideedii mulki aan latirinkarin. Malas iyo xertiisii murtadkii obaamiyo muunkaa kibaakiya musaveni baaderi mahiigiyo kuwii rabay maqaarsaar shariifka ah matxafkeena weeraray musqul iyo ku riday xaar abaalkoodi marisaye. Anaguna masaalkaa magalootiyada haray midmid inaan uqabanaa masiirkeenu weeyaan.maad dhiman qabuurtaad maamuus ku nooshahay ilaa maanta aakhiro ismiidaamintaadii gaalkii madoobaa jabyay mooralkiisii waana mahad ilaahay (xirsi deni)